ရွှေနန်းတော် ရဲ့ ရွှေဝယ်ရွှေရ ကံထူးကြမယ့် ပခုက္ကူ ရွှေပွဲတော် - Vloggest
ရွှေနန်းတော် ရဲ့ ရွှေဝယ်ရွှေရ ကံထူးကြမယ့် ပခုက္ကူ ရွ...
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ရွှေနန်းတော် စိန်ရွှေရတနာဆိုင် ရဲ့ ရွှေဝယ်ရွှေရ ကံထူးကြမယ့် ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ (၂၀၂၀) ရွှေပွဲတော်ကြီး ကို ဇန်နဝါရီလ(၂၉ )ရက်နေ့က ပခုက္ကူမြို့ ၊ အမျိုးသားခန်းမမှာ ဖွင့်လှစ် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Myanmar Idol Season-4 Finalist တေးသံရှင် ဘင်ဂျမင်ဆုမ်း က ပခုက္ကူ ပရိသတ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံကာ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်း၊ အမှတ်တရ လက်မှတ်ထိုးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ တေးသီချင်းများဖြင့် သီဆိုဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။
ရွှေနန်းတော် ရဲ့ ပခုက္ကူ ရွှေပွဲတော်ကြီး ကို လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂ )ရက်နေ့ အထိ ဆက်လက် ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး၊ ဝယ်ယူအားပေးသူများကို (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းမှ (၆၀) ရာခိုင်နှုန်း အထိ အထူးလျှော့ဈေးများဖြင့် ရောင်းချပေးနေသည့် အပြင် ရွှေဆွဲသီး (၂၅၀) ခု၊ ရွှေဆွဲကြိုး (၂၅) ကုံး နဲ့ ဗလာမပါ ငွေသားကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးနေပါတယ်။ ငွေကျပ် သိန်း (၇၀) ဖိုးနှင့် အထက် ဝယ်ယူသူများကို နောက်ထပ် ငွေသား ကျပ် (၁) သိန်း တိတိ ကို ရရှိမယ့် အစီအစဉ်များ ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
The Grand Opening of Shwe Nan Taw 2020 Special Promotion Sales Event Pakokku was held at the National Hall in Pakokku on January 29.
Myanmar Celebrity TV #ShweNanTaw #ForeverGemsbyShweNanTaw #Benjamin #MyanmarIdolSinger
TomMabe.com Josh calls...
Girl Catches Foul Ball...
9/11/09 - Governor Sch...
Crazy Candy Chicken-Ch...
Hartley's Britain's fa...
Snapple flavored Ice T...
Fixing Joe: The Prescr...
Stand Up Comedy by Dar...
90s Sleepover TRAILER
Louis Walsh Found Hang...
Can We Reach Absolute ...
Protesters in Beirut d...
How Eminem Spent A Qua...